Kubudirira V: imwe yemitambo yakanakisa yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kubudirira V mutambo wemitambo natively inowanikwa yeSteamOS
Kuparadzirwa kwakakurumbira kweValve, SteamOS, iyo distro yakanyatsogadzirirwa mitambo yemavhidhiyo yakataurwa zvakanyanya nezvayo nguva pfupi yadarika, ikozvino ine zita idzva rakanyatsogadzirirwa iyi sisitimu yekushandisa Izvo ndezve zano revhidhiyo mutambo Civilization V, yakatangazve iwe.
Mutambo wevhidhiyo une mifananidzo yakanaka kwazvo uye inovavarira kuve mumwe weayo anoshamisa mitambo mune yakasarudzika genre, zvirinani maererano nemitambo yeLinux. Civilization V chivimbiso chikuru chakagadzirwa nevanozivikanwa vanogadzira uye vanowanikwa kune SteamOS uye Linux.
Nebudiriro V unogona kuzvinyudza mune nyika ye vamwari nemadzimambo, nehondo dzinotyisa uye nekushandisa maawa uchizvivaraidza iwe uchironga kukura kwehupenyu hwako, kuzvidzivirira uyezve kurwisa.
Vazhinji vanofunga kuti ndeimwe yeiyo yakanakisa nzira yemavhidhiyo mitambo yeLinux uye kuti inofanira kunge iri pakati pechinzvimbo cheiyo 500 mitambo yemavhidhiyo zvirinani kuLinux. Kunyangwe zviri pachena kuti ese haasi mashoko akanaka, nekuti iwe unofanirwa kubhadhara basa iri. Chinhu chakanaka ndechekuti pandakapinda muchitoro cheStam chiri kupihwa, iine 75% dhisikaundi (shoma) zvinongodhura € 7,49. Kuti uwane iyo, pinda kubva pano (nekudzvanya paTenga Izvozvi).
Ichokwadi ndechekuti kana uchitaura nezve software yeLinux inogara ichitarisirwa kuti ive yemahara, asi kune yakabhadharwa software sezvazviri. Vhura Windows uye Mac uku ndiko kurongeka kwezuva, sezvo angangoita ese mazita makuru anofanirwa kubhadharwa. Kunyangwe zvakadaro, uyu mutambo wevhidhiyo weLinux hauna kudhura zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Kubudirira V mutambo wemitambo natively inowanikwa yeSteamOS
Wakaedza kuitamba pane chero kugovera? ubuntu kana openuse?
Pindura kuna ghonz
Kumutsa ZX Spectrum mitambo paLinux
RedFoX GNU: iwe hausisina zvikonzero zvekusashandisa Linux kubata yako SME